Yongeza iitafile: izibonelelo zokufunda Discover ➡️ Discover Online ▷ ➡️
Wakhe wacinga ukuba mangaphi amaxesha ngosuku ofuna iinombolo zokukunceda kumsebenzi wesikolo owenzelwa ekhaya? IMathematics ikwindawo yonke: ukutya, iivenkile, izambatho, imidlalo, itekhnoloji, nayo yonke into onokuyicinga. Ngoba Ukufunda itafile yokongeza kunezibonelelo ezininzi.
Itafile yokuphindaphinda "ngakumbi" ikhona kwisikolo sethu semihla ngemihla, kwizifundo, kubungcali nakwimpilo yobuqu. Kuya kufuneka ulinganisele kancinci ukuqonda ukuba ukongeza kuyinto yendalo kwaye ixhaphakile kubomi babani. Jonga izibonelelo zokuyifunda.
1 Kutheni le nto ufunde itafile yokongeza?
1.1 Ukufunda ukuphatha imali
1.2 Phucula ukuqiqa
1.3 Yandisa uxinzelelo
1.4 Nxibelelana ngakumbi nokusingqongileyo
1.5 Ukuququzelela iteknoloji
1.6 Yiba nekamva eliqaqambileyo
1.7 Phumelela ububi
Kutheni le nto ufunde itafile yokongeza?
Ukwazi inombolo kunye nokusebenza kwayo kubalulekile kwimali.
Ukufunda ukuphatha imali
Nangona kumagumbi okufundela emveli sifunda kancinci malunga zemali, kwitafile yokongeza, sithatha amanyathelo okuqala okujongana nemali.
Kukuthenga izinto kunye neenkonzo ngaye. Kwaye akufuneki nokuba sitsho ukuba kubaluleke kangakanani ukubala inani lamanani Bala amatyala, ingeniso, iindleko, iirhafu, iifizi, amaxabiso, umvuzo, njl.
Ukukwazi ukuqiqa ngokukhawuleza nangokuchanekileyo kunokufezekiswa ngokufunda itafile yokongeza. Oku kunezibonelelo ezintle ebantwini njengoko benokucwangcisa ngcono iingcinga zabo kwaye benze izigqibo ezifanelekileyo ngokusekwe ingqiqo.
Ukujonga okuqinisekileyo kuvela kuvavanyo, kwi-Enem, kwiimviwo zokungena, kukhuphiswano nakwezinye iimeko ezifuna oko ukungqinelana kweempendulo.
Bona kwakhona: Indlela yokupela amanani ali-10 ukuya kwali-100
Wakhe wazama umsebenzi kodwa akakwazi ukugxila? Le ngxaki iye yanda kakhulu ngokufika kweetekhnoloji ezintsha ezisebenza ngokudibana, zisishiya sisoyika ngolwazi oluninzi.
Ukufundisisa itafile yokuphindaphinda Unceda kule nkqubo yoxinzelelokuba ingqondo ifuna amandla okusombulula iingxaki ezinzima.
Nxibelelana ngakumbi nokusingqongileyo
Ukufundwa kwetafile yokongeza kubangela unxibelelwano olukhulu nokusingqongileyo. Singqongwe yimathematics macala onke kwaye oku kunokukhuthaza abantwana ukuba babe nomdla kwiindawo ezinje izinyuko, izakhiwo ezakhiwayo, iimpawu zendlela, iirisithi zokutya, iintlawulo notshintsho, iimoto kunye nesantya, phakathi kwabanye.
Umgaqo womatshini ngamnye yimathematics.-Kusukela kweyona incinci ikhompyuter okanye isoftware. Wonke umntu usebenzisa amanani ukusebenza.
Kwaye le yindlela emangalisayo yokubona izibonelelo kwitafile yokongeza! Unokufunda ngakumbi ngezi zixhobo zangoku xa siwazi amanani.
Yiba nekamva eliqaqambileyo
Nokuba ungumbhali okanye ugqirha wezilwanyana, kuya kufuneka ufundise izibalo ukuze uphumelele.
Ukuba ufuna ukuba ngugqirha, usomajukujuku, okanye umphathi wenkampani ephumeleleyo, ukuqonda amanani akunakuphepheka. Ke ukuba ufuna ukuba nekamva eliqaqambileyo, yiya kwitafile yokongeza.
Kulula kakhulu ukuphumelela kumdlalo xa ujongene namanani ngokuchanekileyo, emva kwayo yonke loo nto uphawu yenza wonke umahluko! Kuyafana nakwezinye iintlobo zokuzonwabisa: iipaki, imidlalo yebhodi, ezemidlalo, iimuvi, ubuntshatsheli, ukuzingelwa kwabafuna ukutya, kunye neminye imisebenzi eyonwabisayo.